Egg, Potato And Coffee - Motivsuccess
- June 17, 2019June 17, 2019 - The Khant
English Version Is Below!??
တစ်ခါတုန်းက သားအဖ နှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ တစ်နေ့မှာတော့ သမီးဖြစ်သူက အဖေဖြစ်သူကို သူ့ဘဝဟာ အလွန် ဆိုးရွားကြောင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိကြောင်း ညည်းညူပါတော့တယ်။ အမြဲတမ်း ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတာ ငြီးငွေ့နေပြီး ပြဿနာကတစ်ခုဖြေရှင်းပြီးတိုင်း တစ်ခုက ပေါ်လာတာပဲဆိုပြီး ပြောပါတယ်။
စားဖိုမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဖေဖြစ်သူက သူ့သမီးကို မီးဖိုချောင်ထဲ ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေအိုး (၃) အိုးကို ရေဖြည့်ပြီး အပူရှိန်မြင့်မြင့်နဲ့ စတင်တည်ပါတော့တယ်။ ရေအိုးထဲကရေတွေဆူလာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ပထမအိုးထဲကို အာလူးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒုတိယအိုးထဲကို ကြက်ဥထည့်လိုက်ပါတယ်။ တတိယအိုးထဲကို ကော်ဖီစေ့တွေ ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ထို့နောက် သမီးဖြစ်သူကို စကားတစ်လုံးမှ မပြောဘဲ ပွက်ပွက်ဆူတဲ့အထိ ထိုင်စောင့်နေပါတယ်။ သမီးဖြစ်သူကလည်း အဖေဖြစ်သူ ဘာလုပ်နေတာလည်းဆိုတာကို စူးစမ်းရင်း စိတ်မရှည်စွာနဲ့ပဲ စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။
မိနစ် ၂၀ ကြာတဲ့အခါ မီးဖိုကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ အိုးထဲကနေ အာလူးတွေကို ထုတ်ပြီး ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြက်ဥတွေကို ထုတ်ပြီး နောက်ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲ ထည့်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ ကော်ဖီကိုငှဲ့ပြီး ခွက်တစ်ခုထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။
သမီးဖြစ်သူဘက်လှည့်ပြီး “သမီး ဘာမြင်လဲ” လို့မေးပါတယ်။ “အာလူး၊ ကြက်ဥနဲ့ ကော်ဖီတွေပါ အဖေ” ဆိုပြီး မဆိုင်းမတွ ပြန်ဖြေပါတယ်။
“သေသေချာချာ ကြည့်ပါအုံး သမီးရယ်။ အာလူးကို ထိကြည့်ပါအုံး။” ဆိုပြီး အဖေဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။ သမီးဖြစ်သူက အာလူးတွေကို ထိကြည့်ပြီး အာလူးက ပျော့အိနေတာကို သတိထားမိသွားပါတယ်။ ထို့နောက် ဖခင်ဖြစ်သူက ကြက်ဥကိုယူပြီး ခွဲကြည့်ခိုင်းပါတယ်။ အခွံခွာပြီးတဲ့အခါ ကြက်ဥက အကျက်လွန်ပြီး မာနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှ ကော်ဖီကို တစ်ငုံလောက်သောက်ပြီး မြည်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကော်ဖီရဲ့ မွှေးကြိုင်ကြိုင် ရနံ့ကြောင့် သမီးဖြစ်သူ ပြုံးသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာကိုဆိုလိုမှန်း သဘောမပေါက်သေးပါဘူး။ သမီးဖြစ်သူက “အဖေ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။
ထို့နောက် အဖေဖြစ်သူက “ကြက်ဥတွေ၊ အာလူးတွေ၊ ကော်ဖီစေ့တွေက တူညီတဲ့ အခက်အခဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေ ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။”
ဒါပေမယ့် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တုံ့ပြန်ပုံတွေကတော့ ကွဲပြားကြတယ်။
အာလူးက အစက ခက်ထန်မာကျောတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေနွေးပူနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ ပျော့ပျောင်းသွားတယ်။
ကြက်ဥက ရေနွေးပူထဲ မထည့်ခင်အချိန်အထိ ကွဲလွယ်တယ်။ အထဲက အနှစ်ကို အပြင် အကာပါးပါးလေး အုပ်ထားရာကနေ နောက်တော့ ကြက်ဥ အထဲကအရည်တွေ ပိုပြီး မာကျောလာတ
ဒါပေမယ့် ကော်ဖီစေ့ကတော့ ထူးခြားတယ်။ ဆူပွက်နေတဲ့ ရေနွေးပူနဲ့ ထိပြီးတဲ့အခါ ကော်ဖီစေ့တွေက ရေနွေးကို အခြားပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အရာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
“သမီးကရော ဘာနဲ့တူလဲ” ဆိုပြီး ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးဖြစ်သူကို မေးပါတယ်။ “အခက်အခဲတွေနဲ့ သမီးကြုံတဲ့အခါ ဘယ်လို တုံ့ပြန်လေ့ရှိပါသလဲ။ သမီးက အာလူးလို လူမျိုးလား။ ကြက်ဥလိုလား။ ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီလိုလား။”
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ဘဝမှာ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံရပါတယ်။ အခက်အခဲကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို တုံ့ပြန်လဲဆိုတာက အရေးကြီးတာပါ။ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အောင်မြင်မှုတွေ ကွာခြားသွားကြပါတယ်။
ဒီပို့စ်ဟာ သူငယ်ချင်းအတွက်​ အသုံးဝင်​မယ်​လို့ မျှော်​လင့်​ပါတယ်​။ နောက်​လည်း ဒီ Facebook Page ပေါ်မှာ သင့်​အတွက်​ အကျိုးရှိမယ့်​ ဆောင်းပါလေးတွေ ရေးသားတင်​ပြပါအုံးမယ်​။ အကြံပေး၊ ဆွေးနွေးချင်​တာရှိရင်​လည်း Comment (or) Chat Box မှလာရောက်​ဆွေးနွေးနိုင်​ပါတယ်​။ နောက်​တင်​မယ့်​ပို့စ်​တွေကို လက်​မလွတ်​ဖို့ Like & Follow လေးလုပ်​ထားနိုင်​ပါတယ်​။ ဒီ Page ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးချင်​ရင်​တော့ See First လေးလုပ်​ထားပေးပြီး၊ ပို့စ်​ကိုလည်း Share နိုင်​ပါတယ်​။ အဆုံးအထိဖတ်​ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်​ပါတယ်​။
တဈခါတုနျးက သားအဖ နှဈယောကျရှိတယျတဲ့။ တဈနမှေ့ာတော့ သမီးဖွဈသူက အဖဖွေဈသူကို သူ့ဘဝဟာ အလှနျ ဆိုးရှားကွောငျးနဲ့ ရှဆေ့ကျပွီး ဘယျလိုလုပျရမလဲမသိကွောငျး ညညျးညူပါတော့တယျ။ အမွဲတမျး ရုနျးကနျလှုပျရှားနရေတာ ငွီးငှနေ့ပွေီး ပွဿနာကတဈခုဖွရှေငျးပွီးတိုငျး တဈခုက ပျေါလာတာပဲဆိုပွီး ပွောပါတယျ။
စားဖိုမှူးတဈယောကျဖွဈတဲ့ အဖဖွေဈသူက သူ့သမီးကို မီးဖိုခြောငျထဲ ချေါဆောငျသှားပါတယျ။ ပွီးတော့ ရအေိုး (၃) အိုးကို ရဖွေညျ့ပွီး အပူရှိနျမွငျ့မွငျ့နဲ့ စတငျတညျပါတော့တယျ။ ရအေိုးထဲကရတှေဆေူလာတာနဲ့ တဈပွိုငျနကျ ပထမအိုးထဲကို အာလူးထညျ့လိုကျပါတယျ။ ဒုတိယအိုးထဲကို ကွကျဥထညျ့လိုကျပါတယျ။ တတိယအိုးထဲကို ကျောဖီစတှေ့ေ ထညျ့လိုကျပါတယျ။
ထို့နောကျ သမီးဖွဈသူကို စကားတဈလုံးမှ မပွောဘဲ ပှကျပှကျဆူတဲ့အထိ ထိုငျစောငျ့နပေါတယျ။ သမီးဖွဈသူကလညျး အဖဖွေဈသူ ဘာလုပျနတောလညျးဆိုတာကို စူးစမျးရငျး စိတျမရှညျစှာနဲ့ပဲ စောငျ့နခေဲ့ပါတယျ။
မိနဈ ၂၀ ကွာတဲ့အခါ မီးဖိုကို ပိတျလိုကျပါတယျ။ အိုးထဲကနေ အာလူးတှကေို ထုတျပွီး ပနျးကနျလုံးတဈလုံးထဲကို ထညျ့လိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ ကွကျဥတှကေို ထုတျပွီး နောကျပနျးကနျလုံးတဈလုံးထဲ ထညျ့လိုကျတယျ။ နောကျတော့ ကျောဖီကိုငှဲ့ပွီး ခှကျတဈခုထဲ ထညျ့ထားလိုကျပါတယျ။
သမီးဖွဈသူဘကျလှညျ့ပွီး “သမီး ဘာမွငျလဲ” လို့မေးပါတယျ။ “အာလူး၊ ကွကျဥနဲ့ ကျောဖီတှပေါ အဖေ” ဆိုပွီး မဆိုငျးမတှ ပွနျဖွပေါတယျ။
“သသေခြောခြာ ကွညျ့ပါအုံး သမီးရယျ။ အာလူးကို ထိကွညျ့ပါအုံး။” ဆိုပွီး အဖဖွေဈသူက ပွောပါတယျ။ သမီးဖွဈသူက အာလူးတှကေို ထိကွညျ့ပွီး အာလူးက ပြော့အိနတောကို သတိထားမိသှားပါတယျ။ ထို့နောကျ ဖခငျဖွဈသူက ကွကျဥကိုယူပွီး ခှဲကွညျ့ခိုငျးပါတယျ။ အခှံခှာပွီးတဲ့အခါ ကွကျဥက အကကျြလှနျပွီး မာနပေါတယျ။ နောကျဆုံးမှ ကျောဖီကို တဈငုံလောကျသောကျပွီး မွညျးခိုငျးလိုကျပါတယျ။ ကျောဖီရဲ့ မှေးကွိုငျကွိုငျ ရနံ့ကွောငျ့ သမီးဖွဈသူ ပွုံးသှားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဘာကိုဆိုလိုမှနျး သဘောမပေါကျသေးပါဘူး။ သမီးဖွဈသူက “အဖေ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ” လို့ မေးလိုကျပါတယျ။
ထို့နောကျ အဖဖွေဈသူက “ကွကျဥတှေ၊ အာလူးတှေ၊ ကျောဖီစတှေ့ကေ တူညီတဲ့ အခကျအခဲ တဈခုဖွဈတဲ့ ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ ရေ ကို ကွုံတှခေဲ့ရတယျ။”
ဒါပမေယျ့ တဈခုနဲ့ တဈခု တုံ့ပွနျပုံတှကေတော့ ကှဲပွားကွတယျ။
အာလူးက အစက ခကျထနျမာကြောတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရနှေေးပူနဲ့ တှတေဲ့အခါမှာတော့ ပြော့ပြောငျးသှားတယျ။
ကွကျဥက ရနှေေးပူထဲ မထညျ့ခငျအခြိနျအထိ ကှဲလှယျတယျ။ အထဲက အနှဈကို အပွငျ အကာပါးပါးလေး အုပျထားရာကနေ နောကျတော့ ကွကျဥ အထဲကအရညျတှေ ပိုပွီး မာကြောလာတ
ဒါပမေယျ့ ကျောဖီစကေ့တော့ ထူးခွားတယျ။ ဆူပှကျနတေဲ့ ရနှေေးပူနဲ့ ထိပွီးတဲ့အခါ ကျောဖီစတှေ့ကေ ရနှေေးကို အခွားပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ အရာတဈခုအဖွဈ ပွောငျးလဲလိုကျပါတယျ။
“သမီးကရော ဘာနဲ့တူလဲ” ဆိုပွီး ဖခငျဖွဈသူက သမီးဖွဈသူကို မေးပါတယျ။ “အခကျအခဲတှနေဲ့ သမီးကွုံတဲ့အခါ ဘယျလို တုံ့ပွနျလရှေိ့ပါသလဲ။ သမီးက အာလူးလို လူမြိုးလား။ ကွကျဥလိုလား။ ဒါမှမဟုတျ ကျောဖီလိုလား။”
ကြှနျတျောတို့ အားလုံးဟာ ဘဝမှာ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီး ကွုံရပါတယျ။ အခကျအခဲကို ကြှနျတျောတို့ ဘယျလို တုံ့ပွနျလဲဆိုတာက အရေးကွီးတာပါ။ ဘယျလိုတုံ့ပွနျလဲဆိုတာပျေါမူတညျပွီး ကြှနျတျောတို့ အောငျမွငျမှုတှေ ကှာခွားသှားကွပါတယျ။
ဒီပို့ဈဟာ သူငယျခငျြးအတှကျ အသုံးဝငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ နောကျလညျး ဒီ Facebook Page ပျေါမှာ သငျ့အတှကျ အကြိုးရှိမယျ့ ဆောငျးပါလေးတှေ ရေးသားတငျပွပါအုံးမယျ။ အကွံပေး၊ ဆှေးနှေးခငျြတာရှိရငျလညျး Comment (or) Chat Box မှလာရောကျဆှေးနှေးနိုငျပါတယျ။ နောကျတငျမယျ့ပို့ဈတှကေို လကျမလှတျဖို့ Like & Follow လေးလုပျထားနိုငျပါတယျ။ ဒီ Page ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခငျြရငျတော့ See First လေးလုပျထားပေးပွီး၊ ပို့ဈကိုလညျး Share နိုငျပါတယျ။ အဆုံးအထိဖတျပေးလို့ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။
Once uponatime, there wereadaughter andafather. One day, the daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn’t know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling all the time and it seemed just as one problem was solved, another one soon followed.
He then let them sit and boil, without sayingaword to his daughter. The daughter, impatiently waited, wondering what he was doing.
Turning to her he asked. “Daughter, what do you see?” “Potatoes, eggs, and coffee,” she hastily replied.
But she still did not get what he wanted to mention. “Father, what does this mean?” she asked.
“Which one are you,” he asked his daughter. “When adversity knocks on your door, how do you respond? Are youapotato, an egg, oracoffee bean? “
We all have facedalot of adversities in life. How we respond to the adversities is the most important. Depending on different responses, our success varies from others.
We hope this post will be useful for our friends. We will keep uploading beneficial articles on our facebook page. If you have suggestions for the betterment of Motivsuccess, please feel free to reach us through comment or chatbox. We would like to suggest you to like and follow our page not to miss upcoming posts. We would thank you very much if you make see first to our page and share our posts. Thank you very much for reading our post tilll to end.